रिडी र रैराङले मर्जर प्रस्ताव पारितका लागि एकै दिन बोलाए विशेष साधारण सभा | आर्थिक अभियान
रिडी र रैराङले मर्जर प्रस्ताव पारितका लागि एकै दिन बोलाए विशेष साधारण सभा
असार २, काठमाडौं । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले मर्जर प्रस्ताव पारितका लागि असार १७ गते विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् ।
रिडी हाइड्रोपावरको जेठ २४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय थापाथली, काठमाडौंमा दिउसो १ बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । रिडीले भर्चुअल माध्यमबाट सभा गर्ने जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै रैराङ हाइड्रोपावरको असार २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय थापाथली, काठमाडौंमा बिहान ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दुवै कम्पनीको विशेष सभाले रैराङ हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले गाभ्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । यी दुई कम्पनी १ बराबर शून्य दशमलव ९३ को अनुपातमा शेयर आदानप्रदान गर्ने गरी मर्जरमा जान लागेका हुन् ।
यस आधारमा रैराङ हाइड्रोपावरको १०० कित्ता शेयर बराबर रिडी हाइड्रोपावरको ९३ कित्ता शेयर प्राप्त हुनेछ । विशेष साधारण सभाले शेयर आदान प्रदान अनुपातलाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरुले आयोजना निर्माणका लागि पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर निष्कासनलाई जोड दिईरहेको अवस्थामा यी दुई जलविद्युत् कम्पनीहरुले भने मर्जरमा जोड दिएका हुन् । दुवै कम्पनीले यस वर्ष गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मुनाफाबाट एउटै अनुपातमा १२ दशमलव ६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेका छन् ।
हाल रिडी हाइड्रोपावरको चुक्तापूँजी रू. ५८ करोड ५५ लाख ५८ हजार र रैराङ हाइड्रोपावरको चुक्तापूँजी रू. ५६ करोड रहेको छ ।
नेप्सेमा सामान्य करेक्सन, १ अर्ब ४५ करोड बराबरको शेयर किनबेच [२०७९ असार, १७]